कहिले सम्म बस्नु टहरामा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
कहिले सम्म बस्नु टहरामा
Published On : १० माघ २०७७, शनिबार १८:०४
भिमसेन थापा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को धरमपानी, रिठ्ठेपानी, पाण्डेगाउँ, नयाँगाउँ र डाँडागाउँका स्थानीयले टहरामा गुजारा चलाउनुपरेको करिब पाँच वर्ष ९ महिना भयो । २०७२ बैशाख १२ गतेको बारपाक भुकम्पले अन्य ठाउँका मानिसको जस्तै त्यहाँ पनि घरहरु तहसनहस भए । घर भत्किएकालाई नयाँ घर बनाउन सरकारले प्रतिधुरी तीन लाख रुपैयाँ दियो । अहिले गोरखामा अधिकासं घर ठडिए । तर त्यहाँका स्थानीयको घर अझै ठडीएको छैन ।
बस्ती नै चिरा परेपछि पुरानो थातथलो छाडेर गाउँभन्दा माथि लामाचौरमा सबै गाउँले एकै ठाउँमा बस्ने योजना बनाए । सार्वजनीक, बन र ब्यक्तिको जग्गा सट्टापट्टा गरेर स्थानीयले सामुयिक बस्ने निधो गरे । स्थानीय निर्माण समितिले काम थाल्यो । यि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा एक वर्ष भन्दाबढि समय लाग्यो । एक सय ३८ वटा घर बनाउन सहज भने थिएन । निर्माण सामग्री, जनशक्ति, स्रोत सबै अभाव थियो । बस्ती सँगै सडक, बिजुली बत्ती, ढल, खानेपानी लगायतका अन्य पूर्वाधार पनि सँगै निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यी सबै काम गर्दा स्थानीय सँग लागनी गर्ने पैसा भएन । सरकारले भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन उपलब्ध गराएको तीन लाख निर्माण समितिलाई सबैले दिए । त्यसले पुगेन थप तीन लाख दिए । छ लाख रुपैयाँमा चार कोठे दुई तले घर उभ्याएर समितिले घरधनीलाई दिन थालेको छ । तर यो गती सुस्त छ ।
समितिले घर दिएपछि पनि ‘फिनिसिङ’ गर्न अरु पाँच÷छ लाख खर्च भएको स्थानीय बताउँछन् । बिभिन्न कारण देखाएर बस्ती निर्माण ढिला हुँदा पाँच वर्षदेखि टहरामा बस्दै आएकाहरुलाई सास्ती भएको छ । कतिपय त अहिले आफैँ समान्य मर्मत गरेर बस्न थालेका छन् । बस्तीमा १२ घर सरिसके । अन्य पनि सर्न हतार गर्दैछन् । कारण भुकम्पपछि बनाएको टहराले धान्ने अवस्था छैन । अन्यत्रका मानिस भुकम्पपछि नयाँ घर बनाएर सरिसक्दा लामाचौर बस्तीमा सर्नेहरु भने अझै कहिले सम्म टहरामा बस्नुपर्ने भन्ने यकिन छैन ।